Zvikamu zvishanu kutarisana nemusika wekutengesa mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Imwe yekiyi dzekuita kuti mari irambe ichibatsira gore rino kugadzira sarudzo yakanaka mubato rekuchengetedza. Mupfungwa iyi, mutsauko uripo pakati peumwe neumwe unogona kusvika pa kusiyana kusvika ku50%. Naizvozvo, zvichave zvakakosha kuti usaite zvikanganiso mukushandisa kweiri zano rakapararira pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya mune gore iro rinogona kunge rakaomarara kumisika yemari uye kunyanya nekuwanda kwekushomeka mumitengo yezvikumbiro zvemusika wemasheya.
Kana iwe uchida kukwidziridza mari dzako kubva nhasi zvichienda mberi, iwe unofanirwa kutarisisa kumatunhu ayo achabatsira zvikuru mumwedzi iri kuuya. Chokwadi, zvinoenderana nekuti chirevo chako chemari ndechimwe kana chimwe kupera kwegore. Tichifunga nezvechiitiko ichi, hapana mubvunzo kuti kune akati wandei emakesi emasheya anogona kuita zvirinani kupfuura mamwe ese. Nebatsiro iro mune dzimwe nguva rinogona kushamisika kupfuura mumwe mushandisi stock exchange. Kuti tikubatsire iwe mune ichi chinoshuvira chinangwa, tiri kuzokupa iwe akanakisa matunhu ekudyara mune rino gore.
Iyi nzira yekudyara inoitirwa nguva yekusingaperi munguva pfupi. Kana zvirinani kupedza nzira yegore rino rakaomarara iro rinoratidzwa kumisika yemari. Iko nechokwadi chese chekuti hakuzove nekushomeka kwechokwadi kutenga mikana kwaunofanirwa kugadzirira kubva ikozvino Mune zvimwe zviitiko, iwe unongofanirwa kumirira mavhiki mashoma kuti uwane mitengo iri kukwikwidza zvakanyanya kupfuura iya irikutaurwa parizvino. Semhedzisiro yechiito ichi, hapana mubvunzo kuti mukana wayo wekukoshesa uchave wakakwirira kupfuura panguva ino.
1 Masekete muhomwe: Magetsi
2 Chikamu chemauto
3 Kutarisa kuBrazil
4 Chikamu chehotera: vamwe vashanyi
5 Chikamu cheterevhizheni, chine nuances
Masekete muhomwe: Magetsi
Ichi chikamu chebhizinesi ndicho chinoratidzwa nechakanaka chikamu chevaongorori mumisika yemari yekutora nzvimbo. Mune mamiriro ake pokugara kukosha par kugona pamberi pesimba remhirizhonga inogona kugadzirwa mumisika yezvemari. Hazvishamise kuti mune dzino zviitiko, mashandiro ayo ari nani zvakanyanya kupfuura mamwe masiteki emusika. Kunyangwe hazvo vamiriri vayo vasingatungamire kukwira mune zvinoitika zvepamusoro zvemashamba epasi rese emisika.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti makambani emagetsi ndiwo anotungamira iyo govanisa goho. Nekudzoka pane kuchengetedza kunokwanisa kusvika 8% panguva ino, yakakwira zvakanyanya kupfuura iyo kufarira kunogadzirwa nemabhizimusi makuru zvigadzirwa (nguva yekuisa, maakaundi ane mari yepamusoro kana chero hurongwa hwekuchengetedza). Iko kwavanopa kudzoka kwakanyanya uye nguva dzose pazasi peiyo 1% nhanho.
Hapana mubvunzo kuti zvinogona kuva kushamisika kukuru mukati megore rino razvino. Nekudaro, iwe une dambudziko rakakura rekuti makambani mashoma eaya maitiro akanyorwa pane emunyika equities. Muchiitiko ichocho, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekusiya miganhu yedu kuti ugutse ichi chishuwo chekudyara. Kunyanya mu US misika ndiko kunowanikwa makambani akanakisa munharaunda ino yehunyanzvi. Iyi sarudzo inosanganisira kubhadhara kwemakomisheni akakwira kupfuura muzvikwereti mukondinendi yekare. Asi iwo mubhadharo waunofanirwa kutora kana izvo zvaunoda kuwedzera bhenefiti yako inotevera yekudyara portfolio. Pamusoro pezvo, makakatanwa arikuitika mune dzimwe nzvimbo dzepasi rese ari kubatsira tsika idzi kudzikamisa, uye mune dzimwe nguva zvine hukasha.
Kuuya kweault Jair Bolsonaro kuhutungamiriri hweLatin America hofori kwakasimudzira hunyanzvi hweBrazil netarisiro huru. Haufanire kutungamira mari dzako kune rimwe divi reAtlantic. Kana zvisina kudaro, pane kudaro, iwe unogona kuvhura zvinzvimbo mumakambani akanyorwa muinchmarkmark index yeSpanish equities, iyo Ibex 35, iyo inoratidzwa kune iyo nyika. Semuyenzaniso, Telefónica, Banco Santander kana Mapfre, pakati pezvimwe zvakakodzera. Kusvika padanho rekuti ivo vatore pamitengo yavo iyo rebound yemusika weRio de Janeiro. Musika, uyo nenzira, uri kuve unonyanya kubatsira pakutanga kwegore. Iwe haugone kukanganwa chinhu ichi kuti kuchengetedza kwacho kubatsire.
Chikamu chehotera: vamwe vashanyi
La kufamba kwakanaka kwekushanya Nyika dzese dzinofanirwa kubatsira makambani aya kuve nekukosheswa kwemitengo yavo kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, rakanakisa sarudzo yekuchinjisa kuchengetedza kumapoka emahotera akanyorwa pamisika yemari. Vanogona kutora mukana wekuwedzera kwekuyerera kwevashanyi nevashanyi gore rese. Kana ichi chiri chako sarudzo, iwe unofanirwa kuziva kuti parizvino pane makambani maviri akanyorwa pamusika wemusika wenyika. Aya ndiwo maSol Meliá uye eNH Hoteles, ayo ane mukana unoonekera wekuongorora, kunyanya boka rebhizinesi reBalearic.
Chikamu cheterevhizheni, chine nuances
Mukati meichi chikamu cheyeseti pane kukosha kunogona kuita mushe mushe gore rino. Tiri kutaura nezvazvo Netflix, yekuAmerican yekutengesa kambani yekuvaraidza iyo inopa yekushambadzira midhiya yezviri kudiwa pamusoro peInternet pamubhadharo wemwedzi wega wega. Zvinogona kuve kushamisika kukuru kwemari dzepasi rose uye zvine mamwe emhando yepamusoro yekuongorora mumisika yemari.
Chero zvazvingava, ikambani isina kunyorwa mumisika yenyika uye uchafanirwa kuenda kumusika wekuUnited States. Kunyangwe mune zvese zvingangodaro iko kuvhiya kunokubhadhara iwe mune zvemari uye iwe unogona kuwana mabhenefiti anofadza mune yepakati term kana mune yakaipisisa kesi mukureba kwenguva. Kune rimwe divi, kune makambani mazhinji anofarira kutenga. Semuyenzaniso, apuro uye ichi chinhu chinogona kubatsira mutengo wayo kuramba uchikwira. Sezvo zvave zvichiitika mumwedzi ichangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikamu zvishanu kutarisana nemusika wemasheya mu2019